Cooking Oils စားသုံးဆီ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Cooking Oils စားသုံးဆီ
1. Tint Swe Trans Fats ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်သော စားသုံးဆီ
2. Tin Lay ရှေးက မြန်မာကုက္ကိုပင်စည်ကြီးတွေကို ဆီဆုံလုပ်ခဲ့ကြတာ။ သင်္ဘောကုက္ကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဆီဆုံနဲ့ ဆီကြိတ်တဲ့အခါ တချို့နွားက အသုံးပြုလို့မရဘူး။ မူးနေတတ်လို့တဲ့။ လောကီဘုံသား ဆုံလည်နွားသို့ ဆိုတာလို တလည်လည်လှည့်နေရတာ။ ဆုံမှာထိုင်ပြီး နွားမောင်းနေရတဲ့သူလည်း မူးတာပါပဲ။
3. Kyaw Ngwe ဆရာရေ ခုမင်းရွာမှာရော ဗန့်ချီက ရွာအတော်များများမှာ တစ်နိုင်ဆီကြိတ်ဆုံတွေ ထောင်ပြီး နဝလီ ကြိတ်နေကြတယ်ဗျာ။ နွားနဲ့မဟုတ်၊ တရုတ်အင်ဂျင်နဲ့။ ဆုံက နှစ်လုံးတွဲတွေ။ မရောမနှော ပဲဆီသန့်သန့် ကြိတ်သူရှိသလို စားအုံးဆီနဲ့ပလေးပြီးရောင်းတဲ့သူလည်းရှိကြတယ်။ ကျွန်တော့မရီးမှာ အဲလိုဆီဆုံထောင်ပြီးလုပ်ကိုင်စားနေကြလို့ သန့်သန့်လုပ်ကြ၊ စားမကုန်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားရတယ်။
4. Hla Myint ပြည်တွင်းကိုတင်သွင်းနေတဲ့ စားအုန်းဆီတွေဟာ စားသုံဖို့ မသင့်မြတ်တဲ့အကြောင်း လွှတ်တော်မှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး လာရောက် ရှင်းလင်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘယ်ဆီတွေဘယ်လိုကောင်းတယ်ပြောပြော ကျုပ်တို့ ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့ဆီကိုမမှီပါဘူး။ ဝန်ကြီးက စားသုံသင့်တယ်ပြောနေပေမဲ့ တဖက်နိုင်ငံက တရားမဝင် တင်သွင်နေတဲ့ဆီတွေမှာ ဓါတုဗေဒဆေးတွေနဲ့မွမ်းမံပြီးသူတို့ နိုင်ငံမှာအန္တရာယ်ရှိလို့ စွန့် ပစ်မဲ့ဆီတွေ ဖြစ်နေကြောင်း ကြားသိနေရတော့ ကျုပ်တို့ ဒီလိုဆီမျိုးကို စိတ်ချလက်ချဘယ်လိုလုပ်စားချင်မလဲဗျာ။ အောက်ပိုင်းမှာ စားအုန်းဆီစိုက်ဖို့ဆိုပြီး ခရိုနီခရိုစိမ်းတွေအတွက် လယ်သမားတွေဆီက အဓမ္မသိမ်းပေးထားတဲ့ မြေယာတွေ ထဲကစီမံကိန်းတွေ ဘယ်ရောက်သွားလို့ ခုလို စားအုန်းဆီတွေ သွင်းနေကြရတာပါလဲ ဝန်ဂြီးမင်းများခင်ဗျား။
မြန်မာပြည်ထဲမှာနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်သားတွေအတွက် စားသုံးဆီတွေကို သုတေသနလုပ်ထားတာ လိုက်ရှာပေမဲ့ ပြည်တွင်းထဲက လုပ်တာကို လက်လှမ်းမမီသေးလို့ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်ထားတာလေးကိုသာ တင်ပြပါရစေ။
စားသုံးဆီတွေထဲမှာ အရောင်လှအောင် ဓါတုဆိုးဆေးတွေထည့်တဲ့သတင်း ကနေ့မနက် (ဘီဘီစီ) မှာတွေ့လို့ မျှဝေလိုက်သေးပါတယ်။ ဓါတုဆေးက ဘေးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ စားသုံးဆီ ကောင်း-မကောင်းဆိုတာ အနံ့အသက်နဲ့ အရောင်ကြည့်ပြီး ပြောမရပါ။ ဆီထဲမှာပါတဲ့ Total Fat (g) အဆီ (စုစုပေါင်း)၊ Saturated Fat (g) ပြည့်ဝဆီ ဘယ်လောက်လဲနဲ့ Calories (ကလိုရီ) ဘယ်လောက်ရစေသလဲဆိုတဲ့ အချက် (၃) ချက်ကိုကြည့်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စားသုံးနေကြတဲ့ စားအုန်းဆီကနေ ပြည့်ဝဆီ အများကြီးရစေတယ်။ ပြည့်ဝဆီ နည်းတာက ကျန်းမာရေးအရ ကောင်းတယ်။ အုန်းသီးကနေထုတ်တဲ့ဆီက ၃ မျိုး ရှိတယ်။
ဆီအမျိုးအစား၊ (ကလိုရီ)၊ အဆီ (စုစုပေါင်း)၊ ပြည့်ဝဆီ၊
- Coconut oil (ကလိုရီ) ၁၁၇၊ အဆီ (စုစုပေါင်း) ၁၃့၆၊ ပြည့်ဝဆီ ၁၁့၈၊ ပြည့်ဝဆီ အများဆုံး၊
- Palm kernel oil ၁၁၆၊ ၁၄၊ ၁၁၊ ပြည့်ဝဆီ အများဆုံး၊
- Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၆့၇၊ Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၆့၇၊ ပြည့်ဝဆီများတယ်၊
- Flaxseed oil ပန်းနှမ်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၃၊ ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
- Sunflower oil နေကြာဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၈၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Sesame oil နှမ်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၉၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Soybean oil ပဲပုပ်ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၂၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Peanut oil မြေပဲဆီ ၁၁၉၊ ၁၃့၅၊ ၂့၃၊ ပြည့်ဝဆီနည်းမပါ၊
- Cottonseed oil ဝါစေ့ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၃၊ ပြည့်ဝဆီမနည်းပါ၊
- Vegetable oil အသီးအနှံဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊့ ၉၊ ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
- Almond oil မက်မွန်ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၁၊ ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
- Grapeseed oil စပျစ်စေ့ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၃၊ ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
- Hemp seed oil ဆေးခြောက်စေ့ဆီ ၁၂၆၊ ၁၄၊ ၁့၅၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Walnut oil သစ်ကြားသီးဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၁့၅၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Avocado oil ထောပတ်သီးဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ၁့၆၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Olive oil သံလွင်ဆီ ၁၁၉၊ ၁၃့၅၊ ၁့၉၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Corn oil ပြောင်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၂၊ ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
- Smart Balance Margarine မာဂျရင်း ၈ဝ၊ ၉၊ ၂့၅၊ ပြည့်ဝဆီမနည်းပါ၊
- Butter ထောပတ် ၁ဝ၂၊ ၁၁့၅၊ ၇့၃၊ ပြည့်ဝဆီများတယ်၊
Cholesterol in Cooking Oils စားသုံးဆီထဲမှာ (ကိုလက်စထော) ဘယ်လောက်များသလဲကလဲ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန် အရေးကြီးတယ်။ များလေ မကောင်းလေ။ ယူနစ်အဖြစ် parts per million (ppm) နဲ့တွက်ပါတယ်။
- Soybean ပဲပုပ်ဆီ (26 ppm)
- Canola ပန်းနှမ်းဆီ (53 ppm)
- Corn ပြောင်းဆီ (57 ppm)
- Sunflower နေကြာဆီ (26 ppm)
- Safflower ပန်းစေ့ဆီ (7 ppm)
- Peanut မြေပဲဆီ (54 ppm)
- Palm စားအုန်းဆီ (16 ppm)
- Coconut စားအုန်းဆီ (15 ppm)
- Palm kernel စားအုန်းဆီ (25 ppm)